कृतज्ञता बाहिर प्रार्थना - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2021-03 > धन्यबाद प्रार्थना
यो कहिले काहिँ आफैंलाई प्रार्थना गर्न को लागी धेरै मेहनत लिन्छ, विशेष गरी अब जब हामी कोरोना महामारी को समयमा लकडाउन मा छौं र अब एक लामो समय को लागी हाम्रो दैनिक दिनचर्या को बारे मा जान सक्दैनौं। मलाई यो पनी गाह्रो छ कि याद गर्न को लागी यो हप्ता को दिन हो। त्यसोभए के गर्न सकिन्छ जब भगवान संग सम्बन्ध र विशेष गरी प्रार्थना जीवन आलस्य बाट ग्रस्त छ वा - म यसलाई स्वीकार गर्दछु - सुस्तता बाट?
त्यो मलाई मद्दत गर्दछ। ठीक भजन को शुरुवात मा, जे होस्, म आफैंलाई सोधें: दाऊद यहाँ को संग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? केहि भजनहरुमा, डेभिडले भगवान लाई सीधा सम्बोधन गर्दछन्, अन्य मामिलाहरुमा उसले मानिसहरुलाई सम्बोधन गर्दछ र उनीहरुलाई भगवान को लागी कसरी व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने बारे निर्देशन दिन्छ। तर यहाँ दाऊद भन्छन्: प्रभु, मेरो प्राणको प्रशंसा गर्नुहोस्! तेसैले दाऊद आफैंसंग बोल्छन् र आफैंलाई भगवानको प्रशंसा र प्रशंसा गर्न सल्लाह दिन्छन्। उसले आफ्नो आत्मालाई के गर्नु पर्छ भन्नु पर्छ? के यो कारण हो कि उहाँमा प्रेरणाको कमी छ? धेरै मानिसहरु विश्वास गर्छन् कि आफैं संग कुरा गर्नु मानसिक रोग को पहिलो संकेत हो। जे होस्, यस भजन को अनुसार, यो आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बारे मा अधिक छ। कहिलेकाहीँ हामी आफैंलाई राम्रो संग मनमा राख्न को लागी हामीलाई जारी राख्न को लागी प्रेरित गर्न को लागी आवश्यक छ।
यो गर्नको लागी, दाऊद याद गर्छन् कि भगवानले उहाँलाई कती आशिष् दिनुभएको छ। यो हामीलाई येशू को माध्यम बाट भगवान को उदार भलाइ र धेरै आशीर्वाद हामीले प्राप्त गरीएको पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। यो हामीलाई पूजा र हाम्रो सबै आत्मा संग उहाँको प्रशंसा गर्ने इच्छा संग भरिन्छ।
को हो जो हाम्रो सबै पापहरु क्षमा गर्दछ र हामीलाई सबै रोगहरु बाट निको पार्छ? ईश्वर मात्र हुन सक्छ। यी आशीर्वाद उहाँबाट हुन्। उहाँको दयालु र दयालु प्रेम मा, उहाँले हाम्रो कुकर्म माफी दिनुहुन्छ, जो साँच्चै नै उहाँको प्रशंसा गर्न को लागी एक कारण हो। उहाँ हामीलाई निको पार्नुहुन्छ किनकि उहाँ हाम्रो करुणा र उदारता संग हेरचाह गर्नुहुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि सबैजना र सबै अवस्थामा निको हुनेछन्, तर जब हामी निको हुन्छौं, उहाँ हामी प्रति दयालु हुनुहुन्छ र यसले हामीलाई धेरै कृतज्ञताले भरिन्छ।
महामारी को कारण, यो मलाई स्पष्ट भयो कि हामी सबै को स्वास्थ्य कती जोखिम मा छ। यो मेरो प्रार्थना जीवन मा एक प्रभाव छ: म भगवान र मेरो स्वास्थ्य को लागी, बिरामीहरु को निको को लागी, र जब प्रियजनहरु वा खुशी मरेको छु, म भगवान को प्रशंसा गर्दछु उनीहरुका जीवनहरु को लागी जान्दछन् कि उनीहरुका पापहरु येशु मार्फत क्षमा भएका छन्। । यी चीजहरुको अनुहार मा, म प्रार्थना गर्न को लागी एक बलियो प्रेरणा महसुस गर्दछु जहाँ म पहिले यति बेकार थिएँ। मलाई आशा छ कि यो तपाइँलाई पनि प्रार्थना गर्न को लागी प्रेरित गर्दछ।